9 oz Ibhotile yeplastiki yolwelo ye-PP ene-28-410 yokugqiba kwentamo
Ibhotile yethu engamanzi eyi-9oz / 266ml igqityiwe ngezinto ze-PP ukulungiselela udonga olungcono.Umzimba webhotile ujikeleze, ukubonelela ngamava okungcono kunye neshelfu yokubonisa isiphumo.Udonga olugudileyo lwebhotile unokuprinta ilogo yenkampani yakho. Igxalaba lama-28 I-410 inokuxhotyiswa ngempompo yokutshiza, impompo yokutshiza, impompo yegwebu, ukulungeleka ngakumbi ukuyiphatha kunye nokuyisebenzisa.Ingasetyenziselwa ukucoca ikhitshi, ukucoca izityalo zokunkcenkceshela, ulwelo lokubulala iintsholongwane, ukupakisha ulwelo lomlomo, njl.
Isikhongozeli silungele izicelo ezahlukeneyo kunye neemarike, kubandakanya:
Zonke iintlobo zolwelo
Ngezizathu zokuzinza, le mveliso i-100% iyaphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe
IZINTO / INTLANGANISO
INTAMO / UKUVALA IDAYILI
DIAMETER / Ububanzi
1.Izixhobo: PET. Izinto zentsusa zicocekile kwaye zintsha kraca, ezendalo, zilungele ukupakishwa kwezithambiso, ukupakisha kwezonyango kunye nokutya ngokunjalo.
2. Umbala: I-pantone yemibala okanye iisampulu zangempela zesalathiso.
3. Ukuprintwa: Ukuprintwa kwesilk, ukunyathela okushushu kunye nokushicilela nge-offset, iphepha lokushicilela iilebhile okanye izitikha zeplastiki.
4. Ikepusi: Iminqwazi yeplastiki, isitshizi seplastiki okanye iimpompo.
6. Iphakheji: Beka imveliso ngokwahlukileyo I-PP ibhegi emva koko ipakishwe kwiibhokisi.
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda unxibelelane nathi ngaphandle kokulibazisa.
Luluphi uluhlu lwemveliso yakho?
1.Ibhotile yenziwa kwangaphambili ukusuka kwi-6g ukuya kwi-100g
2.Iibhotile ukusuka kubungakanani be-1ml ukuya kubungakanani be-5000ml
Izinto ze-3.Bottle: HEPT, PET, PETG, LDPE, PP, PS, PVC, PMMA (Acrylic)
-Ewe, besikhe sivelisa ibhotile yezilwanyana zasekhaya kunye neekepusi ngaphezulu kwe-5years.
Umbuzo: Luluphi ulwazi ekufuneka ndikwazise lona ukuba ndifuna ukufumana ikoteyishini?
-Umthamo webhotile oyifunayo
-Ubume bebhotile oyifunayo
-Nawuphi na umbala okanye ushicilelo kwibhotile?
Ngaba unika iisampulu zasimahla?
-Ewe, singakunika ezinye iikhompyuter zeesampulu zasimahla kuwe ngomthwalo wokuqokelela
Q5.Zingaphi iintsuku eziza kugqitywa iisampulu? Kwaye malunga nemveliso yobuninzi?
Ngokuqhelekileyo, iintsuku ezingama-5-7 zokwenza isampuli
-Ukuze kwenziwe imveliso ngobuninzi, zihlala ziintsuku ezingama-20-30 emva kokufunyanwa kwe-50% T / T.
Nawuphi na umdla, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi, enkosi kakhulu.
Egqithileyo Ukucaciswa kwe-5ml yendalo ye-PP ende yokuhambisa iziyobisi kwiVagino-anal
Okulandelayo: 0.4 oz ecacileyo PMMA (Acrylic) inshorensi kabini zeplastiki umlomo umlomo nge 22-400 entanyeni entanjeni
Ibhotile yePp engenamoya
I-Pp Cream Jar
206ml iHDPE emhlophe zeplastiki umlomo umlomo ingqayi 52 ...
0.5 oz (15ml) ecacileyo PETG macala dropper bottl ...
206ml orenji iHDPE zeplastiki umlomo umlomo nge 5 ...
0.3 oz blue PET ibhotile tyaba 12-400 intamo fi ...
Uhlobo olutsha 3ml yendalo PE Vagino-anal iziyobisi dispe ...
2.7 oz brown PET ibhotile ezinamacala nge 38-400 n ...